यो क्षेत्रमा पैसाको वर्चस्व छ - साप्ताहिक
यो क्षेत्रमा पैसाको वर्चस्व छ
फाल्गुन २१, २०७२
याम क्षेत्री, लोकदोहोरी गायक
हाल नयाँ गीत रेकर्डिङमा व्यस्त छु । एक ढेड महिनाअघि सार्वजनिक भएका ‘मेरी आमा’, ‘तिम्रो उनी खोइ’ तथा ‘पिर परेर पिउनेलाई’ गीतको प्रवद्र्धनमा समेत सक्रिय छु । त्यसबाहेक विभिन्न स्थानमा हुने स्टेज कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेको छु । अब लोकपप फ्लेभरका आधुनिक गीत पनि गाउने प्रयासमा छु ।
सोचेजस्तो सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ ?
सांगीतिक करियरका क्रममा २ सयभन्दा बढी गीत गाइसकें । शीतल दिने पीपल समी छ, फूल राम्रो गुलाबको काँडा भए नि, यस्तै रहेछ माया, यो चोखो माया मर्दैन, किन यस्तो हुन्छ, मालि गाईको दही मिठो, घामले नि पोल्दियो आदि हिट नम्बरमा परे । मलेसिया, कतार, भारत आदि थुप्रै मुलुकमा आफ्नो प्रस्तुति दिन पाए ।
स्थापित हुन कत्तिको संघर्ष गर्नुभयो ?
पर्वतको पाङ गाविसबाट काठमाडौंसम्म यात्रा तय गर्ने क्रममा लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो । अहिले सांगीतिक क्षेत्रमा एउटा परिचय बनाए पनि मैले अझै लामो यात्रा तय गर्नु छ । २०५९ सालमा काठमाडौं आएपछि म्युजिक कम्पनीहरूको विश्वास जित्न धेरै गाह्रो भयो । एउटा म्युजिक कम्पनीको म्युजिक मिडिया म्यानेजरका रूपमा काम गरेपछि मैले आफ्नो करिअरलाई सहज रूपमा अघि बढाउन सके ।
सुपारी कुटुक्क र पराईको ह्दयमा फुल्न जानेन, यी दुई गीत सार्वजनिक हुँदैछन् । त्यसबाहेक अन्य तयारी पनि छ । गीतिसंग्रह निकाल्ने चलन हटेकाले एक–एक गीत म्युजिक भिडियोसहित सार्वजनिक गर्छु । २०६५ सालमा समर्पण म्युजिक कम्पनी स्थापना गरेर आफ्ना सिर्जना र नयाँ प्रतिभालाई यो क्षेत्रमा अघि बढ्न सहयोग गर्दै आएको छु ।
लोकदोहोरी गीतको क्रेज घटेको हो ?
लोकदोहोरीको टिपिकल फलेभर, मौलिकता हराउँदै गएको सत्य हो तर अहिले पनि राम्रा ठेट लोकगीतलाई दर्शक–श्रोताहरूले रुचाउनुहुन्छ । लोकदोहोरी संगीतको व्यवसायमा समस्या आए पनि राम्रा सिर्जनाले संगीतप्रेमीको मन जितेका छन् । अहिले पश्चिमेली शैलीका छाडा गीतले लोकगीतका रूपमा प्राथमिकता पाइरहेका छन् । लोकदोहोरी क्षेत्रमा कुनै मापदण्ड नभएकाले कस्तो गीत बजारमा आउने भन्ने छैन । संगीत नै नसिकी पैसाको भरमा आएकाहरूको वर्चस्व बढ्नु यो क्षेत्र खस्किने प्रमुख कारण हो ।
प्रकाशित :फाल्गुन २१, २०७२
ग्ल्यामरको क्षेत्रमा करियर